Shiinaha Warshada qajaarka qajaar Peptide iyo alaableyda | Huayan
Waxyaabaha nafaqada leh: kal-qajaarka badda ee kaligood-saccharide, polypeptide, 18amino acids, sunta qajaarrada badda, taurine, glycoside qajaarka badda iwm.
Qajaarka badda waxaa ku jira glycopeptides iyo peptide kale oo firfircoon, molecule poly-peptide yar ayaa leh qaybo badan, waxay leedahay sifooyin jimicsi oo wanaagsan sida milanka, xasilloonida iyo dareeraha hooseeya. Waa cunto ku habboon bukaanada qaba sonkorowga, dhiig-karka, wadnaha iyo wadnaha iyo dhiig-baxa maskaxda.
1 La dagaallama daalka, ka dhig maqaarka mid jilicsan oo jilicsan, dib u dhig gabowga jirka.
2 In kor loo qaado difaaca jirka;
3 yareynta sonkorta dhiiga, ogeysiinta kilyaha iyo dhiig nafaqada leh.
Hore: Digirta peat
Xiga: Caanaha loo yaqaan 'Soybean Peptide'